Umlingo ka-Miller awanelanga njengoba i-Pakistan inqobe i-T20 series
eLahore: Ukushaya okumangazayo kwa-David Miller akwanelanga kuma-Proteas njengoba bagcine behlulwe ngezinti ezine kwi-Twenty20 International yokugcina bedlala ne-Pakistan kanye ne-series ngo-2-1 e-Lahore ngeSonto.
u-Miller wethule umbukiso omuhle kakhulu wokushaya ngokuphanga ama-runs awu-85 emabholeni awu-45 (5 fours, 7 sixes) engakhishwanga njengoba i-South Africa ilulame isuka ku-65/7 ukubeka u-165/8 e-Gaddafi Stadium.
u-Tabraiz Shamsi ukhiqize i-spell esimangazayo u-4/25 ukushiya iqembu lasekhaya lisebunzimeni ku-137/6 emuva kwama-overs awu-17, ngaphambi kokuthi u-Hasan Ali oshaye u-20 emabholeni ayisikhombisa ukuhola iqembu lakhe ekunqobeni kusele amabhola ayisishagalombili.
Umphumela uphethe uhambo lama-Proteas kwisizwe sase-Asia – ukuqeda i-series lapho bekhombise ukuthembisa nokho abadlali abajwayelekile bengekho.
Kumdlalo wokugcina, ukapteni wesikhashana u-Heinrich Klaasen uhlulwe kwi-toss ekuqaleni futhi iqembu lakhe licelwe ukushaya kuqala ukapteni u-Babar Azam.
Kodwa, ukushaya kuqaqeke ngendlela engajabulisi odlala umdlalo wakhe wokuqala u-Zahid Mahmood (3/40) no-Mohammad Nawaz (2/13) behlasela.
u-Janneman Malan (27) kuphela obengoyedwa wabahlanu abakwazile ukuthola isigqi – izinti ngasekuqaleni kushiye i-South Africa engozini yokuphuma yonke ngaphansi kwa-100.
Kodwa u-Miller no-Bjorn Fortuin (10) benze inhlanganiso yama-runs awu-41 ngenti yesishagalombili, ngaphambi kwenhlanganiso engaphuliwe yenti yesishagalolunye yama-runs awu-58 phakathi kwa-Miller no-Lutho Sipamla (8*) ukubeka izivakashi ku-165.
u-Miller ushaye o-six abane kwi-over yokugcina, i-innings yakhe waqeda u-50 wakhe wesithathu kuma-T20I.
Kube ezandleni zabashwibayo, abaqale bazabalaza bebhekene nodlale kahle kwi-series we-Pakistan kwi-series u-Mohammad Rizwan (42).
Kanye no-Haider Ali (15), bobabili benze inhlanganiso ka-51 ngenti yokuqala ukulibeka phambili iqembu lakhe.
Ukufakwa kwa-Shamsi kwi-over yesikhombisa kusongelwe ukushintsha ukuhamba komdlalo emuva kokuthi ahlasele ngebhola ukukhipha u-Haider.
Ukuhlasela kabili kuma-overs akhe amabili kushiye ama-Pakistanis ku-84/3 ngasekupheleno kwe-over yesi-11 futhi walingana futhi umdlalo.
Bese u-Dwaine Pretorius (1/33) ukhiphe u-Babar (44) kwazuza i-South Africa.
u-Shamsi ushintshe izinto zakhetha izivakashi ngokukhipha izinti ezine okwesine wathola i-career-best futhi u-Bjorn Fortuin (1/30) unezezele ngenti ka-Faheem Ashraf (10).
Kushiye ama-Proteas izimise kahle njengoba iqembu lasekhaya belidinga u-28 kuma-overs amathathu kushaya amadoda amabili amasha.
Kodwa, u-Hasan no-Nawaz (18 emabholeni awu-11) bahlaselile ngesikhathi kudingeka ukuze banqobe kusele okungale kwe-over.
Oqophe umlando u-Pretorius ukhiphe izinti ezinhlanu ama-Proteas elinganisa i-series i-CSA iqinisekisa uhlelo lohambo le-Pakistan Ama-Proteas ahlulwe nokho u-Markram ethole ikhulu u-Linde, u-Markram no-VD Dussen banike ama-Proteas ithemba e-Rawalpindi Ama-spinners anika ama-Proteas ithemba Izinti ezinhlanu zika-Nortje ukuhola ukulwa kwama-Proteas osukwini lesibili i-Cricket Australia imemezela ukuhoxa kuhambo lwase-SA Izinti ezinhlanu zika-Nauman zinqobele i-Pakistan i-Test okokuqala u-Rabada ukhiphe inti yesi-200 ngaphambi kokuthi izinti selishonile zihlukumeza ama-Proteas Ikhulu lika-Fawad lishiya ama-Proteas ngemuva u-Rabada uhole ukuqeda kangcono njengoba ama-Proteas ezibuyisele e-Karachi